समाचार Archives - ePosttimes
६ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार ०९:१४ 0
जेठ-६, धरान । धरानमा जारी मतगणनामा वडा नं. १४ को वडा अध्यक्षमा राप्रपाका उम्मेदवार बिजयी भएका छन् । निर्वाचन अघि मात्र नेपाली कांग्रेस परित्याग गरि राप्रपा प्रवेश गरेर वडाअध्यक्षमा […]
५ जेष्ठ २०७९, बिहीबार १०:१३ 0
-शारदा तामाङ राई जेठ-५, भोजपुुर । भोजपुर नगरपालिकाका नव निर्वाचित मेयर कैलाश कुमार आलेले चुनाव प्रचार प्रसार सामग्री आफैले उप्काएर हटाएका छन् । दोस्रो कार्यकालका लागि मेयरमा निर्वाचित भएको दोस्रो […]
हतुवागढीको १ र ९ को वडाध्यक्ष पदमा एमाले विजयी, २ मा पनि एमालेको अग्रता
३१ बैशाख २०७९, शनिबार १४:५२ 0
बैसाख-३१, हतुवागढी । हतुवागढी गाउँपालिकामा जारी मतगणनाको पछिल्लो नतिजा अनुसार वडा नं. २ मा नेकपा एमालेले अग्रता लिएको छ । हतुवागढी गाउँपालिकाकै निर्णायक वडा मानिने २ नं. वडामा खसेको जम्मा […]
३० बैशाख २०७९, शुक्रबार ०२:४० 0
बैशाख-२९ भोजपुुर । भोजपुर नगपालिकामा नेकपा एमालेका मेयर पदका उम्मेदवार भरत तामाङका छोरा दुर्गा योञ्जनले चलाएको प्रेसको लेखिएको गाडीमा एमालेको प्रचार सामाग्री बरामद भएको छ । निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन […]
वैशाख-२, काठमाडौं । आज सुन र चाँदीको मूल्य बढेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । सुनको मूल्य तोलामा पाँच सय रुपैयाँले बढ्दा चाँदीको मूल्य भने तोलामा १५ […]